musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » USA CDC "Dzivisa Kufamba" Chikamu Chabviswa kuJamaica
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Jamaica iri kudiwa nevafambi veUS
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett, nhasi atambira nhau dzekuti United States of America's Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yabvisa Jamaica padanho rechina "Dzivisa Kuenda Kuno Kunoenda" kuongororwa njodzi.
Gurukota rezvekushanya rakarumbidza zviremera zvehutano nevanhu veJamaica nekushanda kudzikisa huwandu hwehutachiona hweCCIDID-19 uye kuchipatara.
Jamaica yave pachinhanho chetatu, iyo inokurudzira vafambi vekuUS kuti vabaiwe zvizere vasati vafamba.
Vanhu vekuAmerica kazhinji vanoramba vachienda kunzvimbo dzavanoda kushanyira.
“Ichi chiitiko chakanaka zvikuru. Ndinoda kurumbidza vakuru vedu vehutano nevanhu ve Jamaika yekushanda kudzikisa huwandu hwehutachiona hweCCIDID-19 uye kuchipatara, izvo zvinosimudzira hurongwa hwedu hwekuongorora njodzi. Kupfuura izvozvo, Resilient Corridor inoramba iri nzvimbo yakachengetedzeka kune vashanyi nevashandi zvakafanana ine mwero wekudzivirira wakakwira uye huwandu hwehutachiona hwakaderera. "
Jamaica yave pachinhanho chetatu, izvo zvinokurudzira Vafambi veUS kubaiwa nhomba yakakwana vasati vafamba. Zvisinei neCDC yekuongorora njodzi, vanhu vekuAmerica zvakanyanya vanoramba vachienda kunzvimbo dzavanoda kushanyira.
Senior Advisor uye Strategist muBazi reKushanya, Delano Seiveright akataura kuti "aya mashoko akanaka zvechokwadi. Iyo yapfuura Level 4 chinzvimbo yakakonzera jitters mune mamwe madenderedzwa uye zvechokwadi yanga isiri yakanaka optics. Nekudaro, nedanho rakavandudzwa iri richabatsira zvakanyanya mukuedza kwedu kwazvino uye nehutsinye kusimudzira vashanyi vanosvika kubva kumisika yedu yese. "
Minister Bartlett parizvino vari kuUnited Kingdom (UK) nechikwata chepamusoro-soro kubva kubazi rezvekushanyirwa kwenyika uye Jamaica Tourist Board (JTB) iri kutora chikamu muWorld Travel Market, imwe yemashoo makuru ekutengeserana ekunze pasi rose. Anobatanidzwa naSachigaro weJTB, John Lynch; Director of Tourism, Donovan White; Senior Advisor & Strategist, Ministry of Tourism, Delano Seiveright; uye JTB Dunhu Director kuUK neNorthern Europe, Elizabeth Fox.
Zvisungo muUK zvinopedza misika yepasi rose inotungamirwa naGurukota Bartlett nevakuru vakuru vake vaisanganisira misika miviri mikuru yeJamaica, United States neCanada, uye vakawana budiriro huru mukusimudzira kusimuka kwendege kuchitsuwa uye nekusimbisa vanobatana paCOVID- kuchengetedzwa kwakabatana kwenzvimbo. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika akatungamirawo misangano muDubai, United Arab Emirates, uye Riyadh, Saudi Arabia, izvo zvichazoguma nekuvhurwa kwemikana yekushanya nekudyara kweJamaica.